HomeWararka MaantaWayne Rooney oo ka hadlay mustaqbalkiisa kubadda cagta
Ciyaaryahanka Wayne Rooney oo shir jaraa’id qabtay ayaa waxa uu sheegay inuu ku qanacsan yahay booska uu ka ciyaarsiiyo tabobaraha sida ku meel gaadhka ah u sii haya xilka leylineed ee xulka England, Gareth Southgate.
Mar la weydiiyay inuu weli doonayo inuu ka ciyaaro khadka dhexe wuxuu kaga jawaabay, “Su’aashaas waan ka daalay, marar badan ayaan ka jawaabaa”.
“Isla jawaabtii ayaan ku celinayaa, waxaan ka ciyaari doonaa meesha uu tabobaruhu iga ciyaarsiiyo. Anigu weligey isuma talin,”.
waxaa sidoo kale la weydiiyay sida uu u arko macalinka cusub ee England Gareth Southgate waxa uu yidhi, Wayne Rooney, “Waa fursad uu ku muujin karo wax qabadkiisa iyo tayadiisa tabobarenimo heerka ay gaadh siisan tahay. Waxa uu tababare u soo noqday ciyaartoyda ka yar 21-ka sano.”
“Waxa uu la iman doonaa qaab ciyaareed u gaar ah. Wayna wanaagsan tahay in taasi la arko todobaadka soo socda,” ayuu Rooney xusay.
“Waan u hogaansameynaa sida uu doonayo, fikradihiisana waan qaadanaynaa, garoonka ayaanan la tagi doonaa,” Wayne Rooney ayaa sidaasi ku sheegay shirka jaraa’id.
Kabtanka xulka qaranka England iyo kooxda Machester United waxa uu u muuqdaa mid sii luminaya booskii joogtada ahaa ee naadigiisa ku ciyaara Old Trafford.
“Imika ma bilaabayo u ciyaarista Manchester United, balse waa inaan si adag u shaqeeyaa si aan uga mid noqdo 11 ka ciyaaryahan ee lagu bilaabo kulamada, markaan fursad helana aan muujiyo howl karnimo”.